VaTsvangirai Vokurudzira VaZuma Kugadzirisa Nyaya dzeSarudzo
Kurume 07, 2012
MDC inotungamirwa naVaMorgan Tsvangirai inoti mutongi gava pagakava remuZimbabwe, uye vari mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vanofanirwa kuwuya munyika nechimbichimbi kuzogadzirisa misariridzwa yemuchibvumirano chezvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dziri kudiwa neZanu-PF kuti dziitwe gore rino.
Izvi zvabuda pamusangano wekomiti huru yebato iri waitirwa muHarare. Komiti iyi yazivisawo kuti kunyange pasina kuwirirana kuti sarudzo dziitwe gore rino, yave kutanga kutogadzirira sekunge kune sarudzo.
MDC-T yashorawo zvikuru mamwe makurukota ehurumende kudivi reZanu-PF kunyanya, VaWebster Shamu, ichiti vari kuramba kuvandudza matorerwo enhau munyika. Bato iri rashorawo nyaya yekurambidzwa kushanda kwemasangano akazvimirira oga kuMasvingo nagavhuna weZanu-PF.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, VaJeremiah Bamu, avo vanoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights, vanoti zvinonetsa kuita sarudzo gore rino sezvo paine misariridzwa yakawanda.
Hurukuro naVaJeramiah Bamu